Imidlalo Nezinkondlo - Kukhuthazwe yimidlalo
NgeSonto, Septhemba 19, 2021
Imidlalo & Izinkondlo Podcast
I-Alphabounce - i-interstellar brick breaker
Imibono yemidlalo ebunyeni
18. Septemba 2021 10. August 2021 UClaudia Wendt0
Ngo-16536 amajele ase-Intergalactic Empire agcwala iziboshwa ezidonsa odilikajele. Ungomunye wabo. Ukukusiza ukuthi uphume, sidale inhlanganisela emnandi yezitini ne-adventure game. I-Alphaboce ikuvumela ukuthi uhlole indawo enkulu kakhulu enezigidi zamazinga athakazelisayo! Ukukhethwa okukhulu kwamadivayisi okuthi [...]
17. Septemba 2021 UClaudia Wendt0
"IBattleforge" ngumdlalo wokuhlulwa. I-Phenomic ibibhekele ukuthuthukiswa, kuhlanganiswa uhlobo lwecebo lesikhathi sangempela namakhadi okuhweba nomdlalo webhodi. Kuthunyelwe ekuqaleni ngo-2017-12-28 09:59:00.
17. Septemba 2021 10. August 2021 UClaudia Wendt0
I-Motion Twin ithuthukiswe noma yasebenza endaweni yesikhulumi seKadokado. Lapho kwakwenzeka ukudlala imidlalo, ukuqoqa amaphuzu nokuwashintshanisa ngamavawusha wesipho e-Amazon. Imidlalo engaphezu kuka-70 ibingatholakala endaweni yesikhulumi. Ngeshwa, angikwazanga nokubhalisa lapho futhi kwagcina sekukhona ekhoneni lemidlalo elahlekile.
16. Septemba 2021 UClaudia Wendt0
Noma ngubani owenza umdlalo ubhekene nombuzo wombono. Umbuzo wokuqala ovelayo ukuthi ngabe yi-2D noma i-3D. Uhlelo lwe-Unity lunikeza izinketho eziningi uma kukhulunywa ngombono womdlalo. Kuthunyelwe ekuqaleni ngo-2019-09-28 13:34:00.
16. Septemba 2021 10. August 2021 UClaudia Wendt0
UMush ungcolise umhlaba kanti uhlelo lweSol luzobhujiswa ngendlela efanayo. Zonke izingqalasizinda nezepolitiki zingaphansi kolawulo lwabo. Kodwa-ke, kunethuba lokugcina lokusindisa ubuntu. Ithemba lokugcina lesintu lizotholakala kubasebenzi bakho abagibela iDaedalus! Ngaphandle kwakho konke, impumelelo ingakwazi [...]
Ngama-Knights wegazi, i-Deck 13 yazama ukwenza ama-knights futhi yahlanganisa ama-vampires ku-RPG. Ngeshwa, awuphumelelanga kulo mzamo. Kuthunyelwe ekuqaleni ngo-2019-06-27 06:51:53.
Ukuhlaselwa Kwensimbi: Ukukhishwa kwe-PC ne-switch
16. Septemba 2021 16. Septemba 2021 UJosefina Meloney0
Umdlalo wesenzo i-Steel Assault uzokhishelwa i-PC neNintendo switchch ngasekupheleni kukaSepthemba 2021. Iqhamuka kwizitudiyo zentuthuko iZenovia neMidlalo Yezinkokhelo. Umdlalo ukuyisa eMelika ngemuva kokubhujiswa, lapho kunezingozi eziningi ezikucashela khona. Ushelela endimeni kaTaro Takahashi, isosha elihlubukile eliku [...]
Isitolo samaGamekeys: okhiye abangabizi kakhulu
Uma ufuna amanani ashibhe okhiye begeyimu, nakanjani uzowathola ku-Gamekeys-shop.de. Ikhasi likukhombisa izintengo ezihamba phambili zokhiye bemidlalo ehlukile. Ngokungafani nesikhathi esedlule, kunezinkinobho zemidlalo ezivela kubahlinzeki abahlukahlukene be-PC kanye nezinduduzo ongazithenga ku-inthanethi. Ngesikhathi […]
15. Septemba 2021 10. August 2021 UClaudia Wendt0
Le yi-arcade yakho yevidiyo eku-inthanethi. Uza lapha ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu futhi ulwe nendlela yakho eya phezulu. Ungathengisa ama-Arcadeo Points akho ngeMttpasses bese uwasebenzisela imidlalo ehlukahlukene yeMotion Twin! Kukhona imidlalo engu-16 ehlukene yokudlala ngezindlela ezimbili ezihlukile. Imidlalo ku- [...]
I-Adventures kaCaptain Comic
14. Septemba 2021 UClaudia Wendt0
I-Adventures kaCaptain Comic I-Adventures kaCaptain Comic ngumdlalo wesikhulumi. Udlala uCaptain Comic futhi uqoqe amagugu amahle emhlabeni uNambi. Uzama ukumelana nokuhlasela kwabaphikisi. Weqa usuka kokunye uye ekuthuthukisweni okulandelayo kwe-Wauffen bese uqoqa izinto ezizokusiza. Kuthunyelwe ekuqaleni ngo-2018-07-27 13:06:00.
Amasayithi wokudlala anconyiwe (2)
Imidlalo nezinkondlo (1.041)
Inoveli Ebukwayo (1)
Into efihliwe (3)
Izinkondlo ezikhuthazwe yimidlalo (58)
umdlalo kunjiniyela (4)
Izinhlelo zegeyimu (96)
Action adventure Capcom I-Daedalic Ezokuzijabulisa zeDaedalic I-Deck 13 I-Lost Games Corner Izitudiyo zentuthuko Igumbi Escape I-Gamescom 2018 I-Gamescom 2019 I-Gamescom 2021 GB I-GBA I-GBC Imidlalo yeHaiku Horror u-James Bond Jump & Run izinkondlo Mega Man N64 NDS I-NES INintendo DS Nintendo Switch PC PS1 PS2 PS3 PS4 PSP Puzzle Okujwayelekile Umjaho womjaho umdlalo wokudlala indima RPG Baleka Sega adubule Simulation SNES amasu Unity Inoveli Ebukwayo
Ubudala bemibuso 1: The Classic 10 ukubukwa
I-Alphabounce - i-interstellar brick breaker 8 ukubukwa
IBattleforge 6 ukubukwa
INkosi Arthur 2 6 ukubukwa
Ama-Commandos 3: Indawo eya eBerlin 6 ukubukwa
Resident Evil 7 - Resident Evil ubuyile! 5 ukubukwa
I-Adventures Emnandi Yesizungu 5 ukubukwa
Isibuko Esimnyama 2 5 ukubukwa
I-Fortnite - isitayela sokuhlekisa 5 ukubukwa
Cookie 5 ukubukwa
Imidlalo Nezinkondlo E-Book
Kwangathi 2021 (53)
Disemba 2020 (57)
Kwangathi 2020 (61)
Mashi 2020 (55)
Izindaba Ezinamandla	| Ingqikithi: Izindaba Eziphilayo ngu I-CodeVibrant.
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi. Ungawacima la makhukhi lapha.
Lewebhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lwakho. Sizocabanga ukuthi ulungile ngalokhu, kodwa ungakhetha ukuphuma uma ufisa. Amasethingi amakhukhiYAMUKELA / YAMUKELA
Ubumfihlo namasethingi amakhukhi
Imininingwane ngamakhukhi / ukubuka konke kobumfihlo
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ukusebenza nokuhlangenwe nakho komsebenzisi. Kunezinhlobo ezimbili zamakhukhi: Okudingekayo kugcinwa kusiphequluli futhi kubalulekile ekusebenzeni kahle kwewebhusayithi. Amakhukhi angadingekile noma avela eceleni asetshenziselwe ukuhlaziywa futhi asibonise ukusetshenziswa kwale webhusayithi. Lawa makhukhi nawo agcinwa esipheqululini, kepha kuphela uma ukuvumela ngokusobala. Kokulandelayo, unenketho yokuvimbela amakhukhi wenkampani yangaphandle. Ukuvala la makhukhi kungathinta ukusebenza kwewebhusayithi.
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa umuzwa wakho ngenkathi uzulazula ngewebhusayithi. Kula makhukhi, amakhukhi ahlukaniswe ngokudingekile agcinwa esipheqululini sakho ngoba abalulekile ekusebenzeni kokusebenza okuyisisekelo kwewebhusayithi. Siphinde sisebenzise amakhukhi weqembu lesithathu asisiza ukuhlaziya futhi siqonde ukuthi usebenzisa kanjani le webhusayithi. Lawo makhukhi azogcinwa esipheqululini sakho kuphela ngemvume yakho. Unethuba lokukhetha ukuphuma kula makhukhi. Kepha ukuphuma kwamanye kula makhukhi kungahle kube nomthelela kokuhlangenwe nakho kwakho kokuphequlula.
Amakhukhi adingekayo abalulekile ukuze iwebhusayithi isebenze kahle. Lesi sigaba siqukethe kuphela amakhukhi avumela ukusebenza okuyisisekelo nemisebenzi yokuphepha yewebhusayithi. Lawa makhukhi awalondolozi noma iyiphi idatha yomuntu siqu.
Akudingekile / akudingekile
Wonke amakhukhi angadingeki ngqo ukuze iwebhusayithi isebenze kahle futhi asetshenziselwa ukuqoqa idatha yomuntu siqu yomsebenzisi ngokuhlaziywa, ukukhangisa, noma okunye okuqukethwe okushumekiwe kubizwa ngama-cookies angadingeki. Kubalulekile ukuthola imvume yomsebenzisi ngaphambi kokuthi la makhukhi asetshenziswe. Uma imvume yokusebenzisa amakhukhi inganikezwa, ngeke isetshenziswe futhi kuzosebenza amakhukhi adingekayo kuphela.